Paradise Cruise Line Grand Classica Grand Bahamas Island Mampody fahombiazana nambara
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Paradise Cruise Line Grand Classica Grand Bahamas Island Mampody fahombiazana nambara
Taorian'ny fiatoana naharitra 16 volana dia niondrana an-tsambo ny mpandeha voalohany tao Palm Beach, Florida ny Bahamas Paradise Cruise Line vao tsy ela akory izay, nanambara ny fahombiazan'ny serivisy ho fahombiazana.
Manome vahana ny fahatongavan'ireo mpitsidika ny tolotra fahavaratra manokana any amin'ireo toeram-pialantsasatra ambony nosy.
Ny sambon'ny sambo fitsangantsanganana ananan'ny fianakaviana sy miasa, Grand Classica, niondrana an-tsambo avy tao amin'ny Port of Palm Beach ny 24 Jolay.
Tonga tany amin'ny Nosy Grand Bahama ny 25 Jolay nanamarika ny fiverenan'ireo sambo fitsangantsanganana an-tsambo "micro-cation" malaza roa alina.
Ian Rolle, filoha, Grand Bahama Island Tourism Board dia manondro ny sasany amin'ny fahombiazan'ny vokatra natolotry ny mpiara-miasa amintsika, Viva Wyndham Fortuna Beach ary Grand Lucayan. "Ankehitriny rehefa niverina ny asany ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia natoky tena bebe kokoa ireo mpitsangantsangana ary faly tamin'ny fahafahany miverina any Bahamas ary ny Viva Wyndham Fortuna Beach ary Grand Lucayan dia manome« micro-cation »tsy hay hadinoina», hoy izy. "Protokol izay napetraka hiantohana ny tontolo azo antoka indrindra ho an'ny mpandeha" hoy hatrany izy.
Marco Gobbi, Viva Wyndham Fortuna Beach Resort, Meshell Britton, Birao fizahan-tany any Grand Bahama Island, Chrisanne Aston, Fofon'ny Bahamas
Francis Riley, Chief Executive Officer of the cruise line dia nanaiky; “Vaksiny 100% ny ekipazy rehetra fa samy mandray vahiny vaksiny sy vaksiny izahay izao. Izany dia nilaza fa manaraka ny kaonty hentitra momba ny fanandramana mialoha ny fidirana sy ny fanarahana ny tolo-kevitry ny CDC izahay mba hahazoana antoka fa hanana traikefa madio sy madio eny an-tsambo. Amin'izay lafiny izay dia tsy maintsy atao saron-tava amin'ny faritra anaty trano rehetra ny sambo, raha tsy rehefa misakafo na misotro ny vahiny. Ny maska ​​dia tsy takiana amin'ny faritra ivelany toa ny tokotanin'ny pisinin-trano, fisakafoanana ivelany, fisotroana sns ... ”, hoy izy.
Mba hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpandeha sy ny ekipa rehetra, ny Bahamas Paradise Cruise Line dia nametraka paikady fahadiovana be dia be, ary manaraka ny politika rehetra voatanisa sy takian'ny CD Framework for Conditional Sailing Order. Raha ny filazan'ny CEO Oneil Khosa, "ny vahiny eny ambony sambo dia afaka mankafy fialan-tsasatra Bahamas madio, azo antoka, mahafinaritra ary akaiky amin'ny trano, miaraka amin'ny fandaharam-potoana feno sambo fitsangantsanganana mandritra ny roa alina."
Nandritra ny fiatoana dia nisy fandaharam-panofanana manokana natolotry ny sampan-draharahan'ny fiofanana momba ny fizahan-tany an'ny Minisiteran'ny Bahamas, ho an'ireo mpiasan'ny hotely Frontline, Taxi Drivers, ary koa ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany fizahan-tany hafa, hiantohana ny fanarahan-dalàna hentitra amin'ny fahasalaman'ny mpitsidika. Eo am-piandrasana ny fiverenan'ilay sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia nanolotra tolotra ho an'ireo mpitsidika mety hitranga ny mpikambana ao amin'ny Grand Bahama Island Tourism Board.
Andriamatoa Marco Gobbi, Tale Jeneralin'ny Viva Wyndham Fortuna Beach Resort, dia nanambara fa: "Faly izahay amin'ny fiverenan'ity mpiara-miasa manan-danja ity ho anay. Hitanay ny fitomboan'ny fonosana Day-pass, ary nitombo koa ny trano fonenanay, - manodidina ny 10% noho ilay programa, 'Cruise and Stay.' Ity dia fanampiana be dia be ho an'ny orinasanay izay niady mafy hitazomana olona onenana. Toy ny (fofonaina) rivotra madio miditra! ” Nanambara ihany koa i Gobbi fa, "Manantena izahay fa hiverina tsy ho ela ny Grand Classica amin'ny sehatry ny asa mialoha ny covid, mamela antsika hahatratra ambaratonga famandrihana, izay hanampy anay hisokatra amin'ny vanim-potoana ambany (septambra ka hatramin'ny desambra) ho avy izao. ”
Eo an-tànana hanatsarana bebe kokoa ny traikefa tafaverina soa aman-tsara ho an'ny mpitsidika, ny Grand Bahama Island Tourism Board dia niara-niasa tamin'ny Fragrance of the Bahamas - The Perfume Factory mba hanamboatra mpanadio tanana manokana ho an'ireo vahiny tonga. Ny saniterer spray antiseptika dia misy alikaola 75%, manadio tsara ny sehatry ny hoditra ary mamono 99.9% ny mikraoba. Ny mpanadio dia 20ml / 0.68 fl. oz misting spray, miaraka amin'ny fofona tropikaly sonia sy endrika tsy manam-paharoa endrika carte de crédit, natao hifanaraka am-paosy am-paosy.
Entanina ireo mpitsangatsangana mety hitsidika ny tranokalan'ny Cruise Line momba ny fomba fandehanan-tsambo ary hamandrika ny diany mankany amin'ny Nosy Grand Bahama.
https://www.bahamasparadisecruise.com/sailing-procedures.php Misy karazana tolotra manokana sy fampiroboroboana ihany koa ankehitriny. Raha mila fanazavana na hamandrihana fitsangantsanganana dia mitsidika www.BahamasParadiseCruise.com/. Araho ny Bahamas Paradise Cruise Line amin'ny Facebook ao amin'ny Facebook.com/BPCruiseLine, Instagram @BahamasParadiseCruiseLine, ary Twitter @BPCruiseLine.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny dia mankany amin'ny Nosy Grand Bahama, mitsidiha www.novaintl.com .
Momba ny Birao fizahan-tany any Grand Bahama Island
Ny Grand Bahama Island Tourism Board (GBITB) no masoivohon'ny varotra sy fampiroboroboana ho an'ny sehatra tsy miankina Nosy Grand Bahama. Ny GBITB dia manana adidy hanohana ny fitomboan'ny harinkarena ho an'ireo mpiaramiasa amin'ny fizahantany ao amin'ny Nosy Grand Bahama.
Ny hetsika dia misy ny fampiroboroboana sy fanatanterahana hetsika isan-karazany momba ny varotra sy fampiroboroboana natao hanatsarana sy hampiakarana ny fahafantarana ny Nosy Grand Bahama sy ny mombamomba azy eny an-tsena. Ny maha-mpikambana ao amin'ny Birao dia ahitana orinasa maro mifandraika amin'ny fizahan-tany ao anatin'izany ny sehatry ny fampiantranoana, trano fisakafoanana, fisotroana, fisarihana, mpamatsy fitaterana, mpanao asa tanana ary mpivarotra antsinjarany.